ညီအရင်းလေးတစ်ယောက်လို ချစ်ခင်ရတဲ့ ထက်ယံအတွက် အမှတ်တရတွေနဲ့အတူတူ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ယုန်လေး - Cele Connections
အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင်၊ ဒါရိုက်တာ ယုန်လေးကတော့ ပျော်ပျော်နေတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း ပြောဆိုနေထိုင်တတ်သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယုန်လေးက လက်ရှိမှာလည်း သူဝါသနာပါရာ အလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေသလို အလှူအတန်းတွေကိုလည်း ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေလျက်ရှိပါတယ်။ စိတ်ထားကောင်းတဲ့ ယုန်လေးက လူချစ်လူခင်ပေါများသလို သူချစ်ခင်တဲ့သူတွေအပေါ်လည်း မိသားစုလို သဘောထားသူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မနေ့က အောက်တိုဘာလ (၁၈) ရက်နေ့ကတော့ အဆိုတော်ထက်ယံရဲ့ မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပြီး ယုန်လေးကလည်း “Happy Birthday Par ချစ်ညီလေး ထက်ယံ အရာရာအဆင်ပြေပါစေ . 🎂 ညီလေး မွေးနေ့ Wish လုပ်ဖို့ Special9Group ပုံလေးတွေ Page ထဲလိုက်ရှာရင် သတိရသွားလို့
Special9ပုံလေးတွေပါ တင်လိုက်တယ်နော်။ Covid ပြီးတာနဲ့ ရွေ့သွားတဲ့ Bkk Show Special9ပြန်သွားပြီး သောင်းကြမ်းကြမယ် . . 🎂🎂🎂🍺🍺🍺🍺🍺” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကနေ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယုန်လေးကတော့ သူနဲ့ ညီအစ်ကိုတွေလို ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ ညီငယ်လေး ထက်ယံအတွက် မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ထက်ယံအတွက် အမှတ်တရမွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းစကားလေးတွေ ပြောခဲ့ကြပါဦးနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Source: Yone Lay ‘s fb
ညီအရငျးလေးတဈယောကျလို ခဈြခငျရတဲ့ ထကျယံအတှကျ အမှတျတရတှနေဲ့အတူတူ မှေးနဆေု့တောငျးပေးလိုကျတဲ့ ယုနျလေး
အဆိုတျော၊ သရုပျဆောငျ၊ ဒါရိုကျတာ ယုနျလေးကတော့ ပြျောပြျောနတေတျသူတဈယောကျဖွဈပွီး စိတျထဲရှိတဲ့အတိုငျး ပွောဆိုနထေိုငျတတျသူတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ယုနျလေးက လကျရှိမှာလညျး သူဝါသနာပါရာ အလုပျတှကေို ဆကျလကျလုပျကိုငျဖို့ ကွိုးစားနသေလို အလှူအတနျးတှကေိုလညျး ဆကျလကျလုပျကိုငျနလေကျြရှိပါတယျ။ စိတျထားကောငျးတဲ့ ယုနျလေးက လူခဈြလူခငျပေါမြားသလို သူခဈြခငျတဲ့သူတှအေပျေါလညျး မိသားစုလို သဘောထားသူတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။
မနကေ့ အောကျတိုဘာလ (၁၈) ရကျနကေ့တော့ အဆိုတျောထကျယံရဲ့ မှေးနလေ့ေးပဲဖွဈပွီး ယုနျလေးကလညျး “Happy Birthday Par ခဈြညီလေး ထကျယံ အရာရာအဆငျပွပေါစေ . 🎂 ညီလေး မှေးနေ့ Wish လုပျဖို့ Special9Group ပုံလေးတှေ Page ထဲလိုကျရှာရငျ သတိရသှားလို့
Special9ပုံလေးတှပေါ တငျလိုကျတယျနျော။ Covid ပွီးတာနဲ့ ရှသှေ့ားတဲ့ Bkk Show Special9ပွနျသှားပွီး သောငျးကွမျးကွမယျ . . 🎂🎂🎂🍺🍺🍺🍺🍺” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာကနေ မှေးနဆေု့တောငျးပေးခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ယုနျလေးကတော့ သူနဲ့ ညီအဈကိုတှလေို ခငျမငျရငျးနှီးတဲ့ ညီငယျလေး ထကျယံအတှကျ မှေးနဆေု့တောငျးပေးခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး ထကျယံအတှကျ အမှတျတရမှေးနဆေု့မှနျကောငျးစကားလေးတှေ ပွောခဲ့ကွပါဦးနျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။